Off-afoot mhepo rezuva uye Diesel chemasanganiswa simba wedzerai hurongwa - China Renergy Equipment Co., Ltd
Off-afoot mhepo rezuva uye Diesel chemasanganiswa simba zvitengeswa hurongwa
Ndichishanda musimboti wegadziriro:
Wind turbine uye rezuva paneeli chamutsa magetsi, magetsi ari kupomerwa kupinda bhatiri boka parutivi ndinorova controller, uye zvino kuburikidza inverter, kuti hurongwa wedzerai AC simba nokuda mitoro. Diesel jenareta rinoshandiswa senzira musana simba, zvichava kutanga kana mhepo uye zuva havakwanisi, undoraira kupinda bhatiri kudzivirira bhatiri.
ino unoshandiswa nevakawanda kusina simba panguva kumaruwa; Kuti uderedze simba zvinodyiwa uye zvakatipoteredza kusvibiswa uye kuponesa mutengo, pachirehwa mhepo uye simba rezuva kundochingamidza simba kushandiswa zvinodiwa. ino anogona kushandisa idzva simba rizere uye kuvandudza itsva simba kunyatsoshanda kuderedza Diesel zvinodyiwa uye zvakatipoteredza kusvibiswa uye kuponesa simba
RW-5kW shanduka namo, DC240V
Off-afoot mhepo yokutenderera zuva uye Diesel chemasanganiswa controller
5kW mhepo, 5kW zuva, DC240V
Modularized patani; uvandudze hurongwa akavimbika kuburikidza wandisa design, izvo runovimbisa hurongwa vanongogona kushanda kana mumwe subsystems ane atadze kushanda zvakanaka.
simba Good zvitengeswa zvinovimbisa
Multiple simba complementation; kudzora yavose sezvavakatarirwa simba chinja Diesel simba kushandiswa kana maitiro simba kukwana uye Zvichakadaro akagura zvisingakoshi mutoro kuti vawedzere hurongwa simba zvitengeswa nguva.
Sezvo chikuru simba iri dubious uye zvishoma, asi kushanda wegadziriro inofanira kukosheswa; gadziriro adopts IGBT simba modules uye PWM kudzora muoti kuderedza hurongwa simba rakawanda.
The Hurongwa anoshandisa modular magadzirirwo kuti pave nemamiriro scalability; kupa chinja kuwedzera hurongwa simba vanokwanisa nechokwadi nemamiriro ndiwedzere
High kushandisa michina
The Hurongwa chikumbiro yose adopts otomatiki nzira kudzora maitiro uye kuderedza masimba evanhu, kwete chete kuvandudza kushanda kunyatsoshanda, asi kunowedzerawo hurongwa kuchengeteka uye rakavimbika
Home chikumbiro, chitsuwa, musha muduku, muduku simba chiteshi, micro afoot hurongwa, dzomumaruwa mudzimba, zviduku Holdings, zvokurima, zvokutengeserana.
Post nguva: Apr-03-2018